Kadhi rezuva raamai | Mhizha On
Kadhi rezuva raamai
DonluMusical | | Mapepa emhizha, Maoko ezuva raamai
Svondo yekutanga yaMay inopembererwa Zuva raamai uye pazviitiko zvakawanda hatizive chekupa. Mune ino posvo ndinokuunzira kadhi rino kushamisira vanamai vako uye iye zvechokwadi anofara kwazvo nekuti chichava chakakosha chipo chemaoko.
Tine zvigadzirwa zvishoma kwazvo tinogona kugadzira iri basa rakareruka, asi panguva imwechete yakanaka. Tinogona kutokororazve uye kutora mukana wezvidimbu zvemakadhibhokisi atakasiyira kubva kune mamwe mabasa.
1 Zvishandiso zvekugadzira kadhi
2 Maitiro ekugadzirisa
Zvishandiso zvekugadzira kadhi
Makadhi ane mavara
Glue stick kana silicone pfuti
Cheka zvidimbu zviviri zvebepa rekuvaka nezviyero zvinotevera:
Huru: 32 x 24 cm (peta iri hafu kuti riite 16 x 24)
Diki: chidimbu che 12 x 20cm.
Kana uchinge watemwa, namatidza diki pamusoro peiyo huru.
Nerubatsiro rwe ruva gomba punchi kana iyo modhi yauinayo kumba gadzira zvidimbu zvishoma zvevhavha.
Sarudza ina uye uadzimise semunda webindu. Iine mamaki egirini mune akasiyana shades dhonza madzinde nemashizha emiti iyi.
Nema marker isa izwi rekuti "Amai" mumaruva. Shandisa ruva kwetsamba imwe neimwe.
Ipapo nyora mazwi "ndinokuda" nemuvara waunonyanya kufarira. Edza kugadzira mamwe mavara akanaka. Kana dzikasabuda zvakananga, unogona kudzidhonza kutanga nepenzura.
Kuti ndipedze kadhi, ini ndawedzera zvimwe zvakadai se zuva uye shavishavi kubhururuka nemubindu Rangarira kuti iwe unogona kuzvigadzira iwe nezvaunoda nemavara, maumbirwo, nezvimwe.
Isu tinongoda kuisa Meseji yemunhu yaamai vedu kana kuisa pikicha kana tichida. Saka zvichave zvakanakisa.
Ndinovimba iwe waifarira basa iri uye kana ukadaro, usakanganwa kunditumira foto kuburikidza nechero yangu yemagariro network
Kana iwe uchida makadhi, ini ndinokurudzira imwe yaunogona kuita. Izvo zvakare zvakakwana kuna amai vako kana mumwe munhu akakosha.
Dzvanya pamufananidzo kuti uwane iyo dzidziso.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mhizha On » Crafts uye zvinhu » Mapepa emhizha » Kadhi rezuva raamai
Isu tinoronga matepi
Maitiro ekugadzira ruva bheya rakagadzirwa nefimo kana polymer ivhu